Manchester United oo tallaabo la yaab leh ka qaadaneysa soo daahitaanka kullamada Champions League-ga. – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Manchester United oo tallaabo la yaab leh ka qaadaneysa soo daahitaanka kullamada Champions League-ga.
By admin on 05/11/2018 No Comment
Isniin, November, 5, 2018(HNN) Maadaama ay Manchester United awoodi waysay in xilli hore ay garoonka Old Trafford soo gaaraan kullamada Champions League-ga ee ay la kala ciyaareen Valencia iyo Juventus, waxa ay hadda ka fikirayaan inay bar-fadhi cusub sameystaan.
Jidadka oo aad ciriiri u noqda ayaa u sabab ahaa in United ay kasoo dib dhacaan soo gaaritaanka garoonkooda, waxaana Tababare Jose Mourinho uu eedeyn kala dul dhacay ciidanka jidadka ee loo yaqaanno (Traffic).
Sidaas oo ay tahayna, Red Devils waa ay beddesheen hotel-ka ay kasoo ambabaxayeen ka hor kullankii Juve, maadaama lagu ganaaxay inay soo daaheen ciyaartii Valencia.
Haddase, The Sun waxa ay werrineysaa in kooxda Manchester United ay sameysanayso saldhig cusub oo ay ka soo dhaqaaqaan marka ay Old Trafford ciyaar ku leeyihiin.
Waxaa lagu soo warramayaa in maamulka kooxda ay ka fikirayaan inay Ryan Giggs iyo Gary Neville kala hadlaan isticmaalidda Hotel-kooda.
Halyeeyada Red Devils waxa ay Hotel lagu magacaabo Hotel Football ay ku leeyihiin kasoo horjeedka garoonka Old Trafford.
Jose Mourinho ayaa go’aan adag qaatay kullankii Juventus ay la ciyaareen maadaama uu kusoo dhex lugeeyay taageerayaasha, iyadoo ciyaartoyda kooxda ay bas-ka saarnaanaayeen muddo 45-daqiiqo ah.
Manchester United ayaa habeenka Arbacada booqan doonto magaalada Turin ee dalka Italy, halkaas oo ay wejiga labaad ee kullamada Group-yada tartanka Champions League-ga kula soo ciyaari doonaan Juvnetus.
Manchester United oo tallaabo la yaab leh ka qaadaneysa soo daahitaanka kullamada Champions League-ga. added by admin on 05/11/2018